XOGTA MAANTA, Warqad furan oo ku socota Aqoonyahanka Reer Maakhir (Qormadii 4aad | maakhir.com
XOGTA MAANTA, Warqad furan oo ku socota Aqoonyahanka Reer Maakhir (Qormadii 4aad
November 12, 2007 in Maakhir
Qormo:- As salaama calaykum- Waxaan salaamayaa qof kasta oo nasiib u yeesha in uu akhriyo qormadan. Qoraalkan oo ah kii 4aad ee aan kula hadlayo dadkayga ma garan karo halkii aan ku gebagebeeyey qormadii tan ka hooraysey, laakiin waxaan xusuustaa aniga oo u muuqa in aan la hadlayo dad dhega la, dad damiir aan lahayn, dad hurdadii reer kahaf oo kale galay, dad aan dareensanayn waxa hareerohooda ka dhacaya, dad afkana ka faana calooshana ka buka, oogadana ka dayacan, dad noqday maanta kuwo tusaale loogu qaato marka la tilmaamayo dib u dhaca iyo darxumada xagga degaanka, dad dhulkoodii ka haajiray.
Dulucda qoraaladayda qof kasta oo wax garan karaa wuu fasiri karaa waxa aan ula jeedo iyo waxa ay ku salaysan tahay canaantan joogtada ii noqotay ee aan kula dhacayo dadka aan ka dhashay,oo aan anigu ugu horeeyo inta loola dan leeyahay.
Waxa aan la qaylinayaa ma aha hawl aniga aan goonni u leeyahay, waa wax inaga dhexeeya, waxan keliya rabaa in la ila fahmo jawaabaha 6da suáalood ee hoos ku qoran.
1. Maxaa khaldan?
2. Yaa khaladka sameeyey?
3. Ma la daaweyn karaa?
4. Goormaa la daaweyn karaa?
5. Side loo daaweyn karaa?
6. Yaase laga sugayaa in uu daweeyo?
Intaa haddii aynu jawaabohooda meel isla dhigno, fulintoodana ku darno ogaada in aynu guul joogno, markaana ay inoo furan tahay in aynu hor fariisan karno oo la beratami karno quruumaha inaga tegey.
Suáalaha jawaabohooda idinkaan idiin dhaafayaa, waxanse uga dugbayaa, sababta la isugu eeganayo hawl inaga wada dhexaysa oo aynu ka wada marakacayno in ay baylah tahay oo wax ka qabasho u baahan tahay,
Dhaqankeenna miyigu waa mid ku dayasho mudan marka laga eego dhinacyada hawl qabashada, lagama yaabo beel reer miyi ah oo meel wada degan in ay isku eegato oo isku tuurtuurto marka ay la soo dersaan hawlaha guud iyo gaarba sida:
1. geediga iyo gaadiid celiska
5. aroorinta xoolaha
6. dhismaha iyo yagleelka guriga
7. aaska meydka
8. xera oodka
9. mag iyo gashi ururinta
10. gar niqidda
11. guurka iyo arooska
12. samaynta qalabka guriga
13. ceel qodidda
14. beer falidda
15. xoola lisidda
16. difaaca xoolaha, degaanka, nafta iyo sharafta
iyo hawlo kale oo fara badan oo aanay sina ugu kala maarmin dakii reermiyiga ahaa ee hore iyo kuwa maanta joogaba.
Masiibo waxay timid markii la yiri magaalo ha loo guuro, school ha la dhigto, jaamacado ha laga soo baxo aan waxba laga faaíidin, dibadaha ha loo dhoofo oo dhaqan shisheeye ha iska yeelyeelo.
Intii la rabey in ay horumarka sababaan ayaa ummaddii ku noqotay caqabad, reer miyigu qabiil ayey ku dhaqmaan laakiin xeerkiisa ayey yaqaaniin kumana xad gudbaan , iskuma nacaan iskumana jeclaystaan, ninku markii u soo hoydo qoys kale aad baa loogu farxi irey oo loo soo dhoweyn jirey, laguna maamuusi jirey, xil gooni ahna la iska saari jirey, waayo waxa la hubey in berrina isaga gurigiisa loogu tegi doono iyadoo safar ama socoto la yahay.
Sidaas ayey ku lahaayeen wada shaqayn iyo is ixtiraam.
Marka loo soo gudbo dhaqanka magaalada oo ah kii ay ilbaxnimadu ka bilaabatay ayaa waxaa isku qasmay xilalkii lookala hayey bulshada. Qof waliba wuxuu ku meelmaraa “maxaa kaa galay ma adigaa goonni u leh”.
Ilbaxnimada iyo xadaaradda aad maqasheen waa hab dhaqameedka cilmiyaysan oo ka tarjumaya nolosha dhabta ah,
Haddii umaddu isku kaalmayso waxa wanaagsan sida rabbi quráanka inoogu sheegay وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ( waxay gaaraysaa horumar adduun iyo aakhiroba waxa ayna ka badbaadaysaa caro alle iyo ciqaab).
Mar ka aan isticmaalayo kelmedda dadkaygow uma jeedo warsangeliyow waxan u jeeda cid kasta oo ku dhaqanta degaankan aan ka hadlayno ee maakhir loogu magac daray ama guud ahaan soomaaliya , inagoo aan ka tegayn wad dhalashada iyo nasabka hadana ogaada in aynu nahay dad isku mid ah adduunkana ilaahay inoo keenay in aynu isaga ku caabudno inagoo adeegsanayna nimcada uu inagu galadaystay
Qofkastaa waxa uu kownkan soo galay isaga oo huwan maro yar oo cad oo ay ku qabatay umulisadii ka soo bixisay hooyadii magaciisana la yiraahdo “mowluud”aan magac lahayn saacado ama maalmo yar ka dibna la siiyey maga ku meel gaar ah “temporary name”oo ah kan uu adduunka ku caysho ee loogu yeero, maalinta uu dhintana dib loogu duuduubayo isla maradii yarayd ee cadayd magicii ku meel gaarka ahaana laga qaadayo oo loo bixinayo magic cusub oo uu kala mid yahay kuwii aakhiro uga sii horreeyey lana yiraahdo “Meyd” cid dambe oo soo hadal qaadaysaana aanay jirin ilaa uu ciidda ku milmo oo uu baabaó, halkaana uu kula kulmi doono rabbigii khalqay oo uu la xisaabtami doono, qabiil iyo xoolana aanay awood u lahayn in ay difaacaan ama wax u taraan.
Marka adduunka aayihiisuba sidaa yahay haddii aynu isku seegno reer habel iyo reer hebel sow nasiib darro ma aha.
Dantu waxa ay tahay degaanka iyo waxa saaran ilaahay ayaa inoo laylyey oo inoo sakhiray inta aan ilaahay inna dufayn oo innoo caroon sida qoomamkii inaga horeeyey aynu garanno waxa ina horyaal iyo waxa la inaga rabo. Marka hore aan rabbigeenna na khalqay ka cabsanno oo wixii uu inna faray aan samaynno wixii uu inaga reebayna aan iska deynno, marka labaadna aan degaankeenna badbaadsanno oo cammiranno sidaas ayeynu ku noqon nkarnaa ummad qiima ka leh xag rabbi iyo xag aadame labadaba
Waxa ay garteen aboorka iyo shinnidu miyeynu garan weyney?
miyeynaan wada jir wax uga qaban Karin dhibaatooyinka ka taagan degaankeenna inagoo gacmaha is haysanna?
Maxaynu isu nacnaa marka aynu wax ha laqabto isla soo qaadno? Maxaa loo collaystaa qofkeenna horumarka ka hadla?
Maxaynu u daba galnaa keenna wanaag qabo is yiraahda?
Maxaynu u haybsanaa qabiilka uu ka soo jeedo qofka bulshada u kaca in uu wax u qabto?
Maxaynu uga bakhaylnaa qadar yar oo acag ah oo koob shaah ah la qiima ah?
Maxaa inaga dhigay dad iyagu is neceb hadana sheegta in ay dadka iska xigaan?
Maxaa inaga dhigay dameer malab sida oo inaga oo dhul khayraad ka buuxo degan aynu P/lan iyo S/land gacmaha ugu hoorsanaynaa?
Maxaa inaga indha tiray horumarka ay gaareen umadaha inala midka ah?
Ganacsatadeenu mid yar iyo mid weynba ma garan waayeen isu taga oo urur samaysta kuna heshiiya in aad wada jir u dhistaan dekedda laasqoray?
Aqoonyahankeennu ma garan waayeen aqoontii la idin baray godka ha la gelina ee dib ugu celiya dhulkiina oo uga faaíideeya, dadkana wixii aad barateen u sheega?
Odayaasheennu ma fahmi waayeen dadka qabiilka iyo qoysqoyska isu nacay heshiisiiya oo daweeya turxaamaha sababaha laga dhiganayo, oo dadka kala gar mariya sidii dhaqanku ahaan jirey?
Suldaanka reerka cimaamadda u sida ma wuxu garan waayey xilkiisii ahaa in uu sameeyo guurti isku dhafan oo ruug caddaa ah oo degaanka xeer u samaysa caddaladna lagu meel mariyo?
Siyaasiyiinteennu miyey ka garasho iyo aqoon liitaan kuwa beelaha kale ee beratanka ugu jira siyaasadda dhexe ee soomaaliya mise waa laga mamnuucay in ay qayb ku yeeshaan?
qurbajoogta degaanka u dhalatay ma waxay isa siiyeen dhulalka qalaad ee ay habeen dhaxa ku joogaan? Miyaanay ogayn inay hurran ihiin dhulkii ay u dhasheen”lama huraan waa caws jiilaa”
hooyoyinkeennu ma garan waayeen tarbiyadda carruurta cusub wax ka bedela maadaama jiilalkii hore dhamaatood ay noqdeen wax matarayaal qabyaalad iyo cuqdad lagu beeray?
Culimada diinta ee degaanka u dhalatay maxaa ka hortaagan in ay ummadda baraarujiyaan iyo khayrka faraan xumahan ka reebaan?
Cidda uu qof waliba isku halaynayaa ee wax laga sugayaa waa ayo?
Dhulka miyaa la inala wadaagaa mise cid kale ayeynu uga baqaynaa haddii aynu faraha la galno wax ka qabashadiisa, ma gurigeena hagaajintiisa ayeynu cid kale uga amar qaadanaa?
Ugu dambayntii side ugu sahlan oo mugdigan uga bixi karnaa qof walowba ra‎igaaga cabbir adiga oo ficilna daba dhigaya ka markhaanti ah wax qabadkaaga.
Gunanadkii qormadayda ciddii doonaysa in ay hesho jawaabaha suáalaha kor ku xusan ama ay la noqoto in ay bulshada wax u qabato ha ku soo xirmo golaha aan u samaynay wax garadka degaanka oo la yiraahdo maakhir group waxaad ka soo codsan kartaa in aad xubin ka noqotid, si aad u akhridid maqaalada iyo talooyinka lagu soo jeediyo, fikradaada ayaad ka dhiiban kartaa, waxaad kala soo xiriirtaa :
e-mailka golaha: maakhir@googlegroups.com
e-mailka Masúulka: dahabkwb@gmail.com
C/rasaaq Cali Maxamed
La soco qormada 5aad……………………..
« Anti-Ethiopia protests continue in Somalia’s capital
Somali government troops and Ethiopian forces have closed down Mogadishu’s main market to search for insurgents. »